Kpido: drupal | Martech Zone
Saturday, December 12, 2020 Monday, November 22, 2021 Douglas Karr
Monday, November 30, 2020 Tọzdee, Disemba 22, 2020 Douglas Karr
Ọ bụrụ n ’esoghi Joel Comm, mee ya. Ugbu a. Joel bụ otu n'ime ihe enyemaka kachasị amasị m maka teknụzụ. Ọ na-ekwu okwu n'eziokwu, na-akwụwa aka ọtọ, na-enweghị nghọta. Onweghi otu ubochi gabigara na m nagaghi achoputa ihe ochoputara ozo… ma taa bu nsogbu! Joel mere ka onye ọ bụla mara banyere ngwá ọrụ ọhụrụ n'ịntanetị, wepụ.bg. Ngwá ọrụ ahụ na-eji ọgụgụ isi eme ihe iji nyochaa ihe oyiyi na ndị mmadụ wee wepụzie ya kpamkpam. Ọ bụrụ
Tọzdee, Ọktoba 25, 2018 Tọzdee, Ọktoba 25, 2018 Douglas Karr
N’ọnwa ọ bụla, m ga-enweta puku mmadụ ole na ole na-alọghachi site na ihe nchọgharị anyị na-agbakwunye. O di nwute, ikpo okwu anyi hoputara ugbua na emechi ugbua ka m gha chota ohuru. Kasị njọ, ọ nweghị ụzọ isi ebubata ndị debanyere aha ochie ahụ na saịtị anyị ka anyị wee nwee nsogbu. N'ihi nke a, achọrọ m ịhọrọ ikpo okwu a maara nke ọma na nke nwere ike ịba. Achọtara m ya na OneSignal. Ọbụghị naanị